Apple na-ewe naanị akwụkwọ akụkọ "808" | Esi m mac
Apple jidere naanị akwụkwọ akụkọ «808»
Apple enwetala ikikere iji gbasaa ihe nkiri vidio "808", a audiovisual mmepụta nke DJ Zane Lowe na-akọ banyere mmetụta nke Roland TR-808, otu n'ime igwe igwe eji arụ ọrụ mmemme mbụ., nakwa na ọ ka nwere ụwa egwu, n'agbanyeghị agbanyela ya na 33 afọ gara aga.
Emepụtara akwụkwọ nyocha ahụ "808" na 2014 ma kemgbe ahụ, enyocha ya na ememme nkiri dị iche iche na United States. Ugbu a, Apple nwere ikike pụrụ iche maka nnyefe ya, ihe a ga-ahụ maka oge mbụ na Disemba 9 site na egwu egwu egwu ya Apple Music.
1 Apple Music ga-agbasa ozi nanị "808"
2 Kedu ihe bụ Roland TR-808
2.1 Gịnị bụ ihe ịga nke ọma ya n'ihi?
Apple Music ga-agbasa ozi nanị "808"
Malite na Disemba 9 na-esote, ndị debanyere aha Apple Music ga-enwe ike ịnụ ụtọ ihe nkiri "808" naanị, site na ngwaọrụ iPhone ma ọ bụ iPad, Apple TV ma ọ bụ site na Apple Music na Mac site na iTunes.
Companylọ ọrụ Cupertino enweta naanị ikike mgbasa ozi nke mmepụta akwụkwọ a na-emetụta mmetụta nke igwe eji arụ ọrụ Roland TR-808 nwere, ma ka nwere, na ụlọ ọrụ na-emepụta egwu.
Iji kwusaa ozi ọma a, Apple ewepụtala ụgbọala na-adọkpụ maka "808" na gọọmentị Beats 1 na YouTube.
Kedu ihe bụ Roland TR-808
Dika egosiputara na vidiyo nkwado a, igwe ihe eji egwuri egwu Roland TR-808 kpalitere ezigbo mgbanwe na ụlọ ọrụ na-emepụta egwu, na-enwe mmetụta dị ukwuu ruo taa na ụdị egwu dị iche iche dị iche iche. "Site na Afrika Bambaataa 'Planet Rock' iji rap, R&B na elektrọnik, ụda ahụ na ụda bass nke 808 na-emetụta ma na-akpali ndị na-emepụta egwu maka ihe karịrị afọ iri atọ," Apple Insider kwuru.
Roland TR-808 Rhythm Composer (nke a bụ aha ọrụ ya) bụ ihe ịga nke ọma maka ụlọ ọrụ egwu dịka ọ bụ otu n'ime igwe izizi igwe eji arụ ọrụ n'ahịa. N'ezie, etu e si ede aha ya bụ "TR" bụ ndebiri maka N'afọ iri na ụma transistor.
Emebere ya na 1980 site na ụlọ ọrụ Roland Corporation, ebe atụrụ ime imepụta demos site na ndị egwu studio.
Gịnị bụ ihe ịga nke ọma ya n'ihi?
Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara n’egwú weere ya dị ka ngwaahịa dị ala ma a bịa n’ịdị mma (nke Linn LM-1 karịrị nke pụtara na ọnwa ole na ole tupu mgbe ahụ ma bụrụ igwe mbụ ịgbà iji jiri dijitalụ dijitalụ), ọnụahịa ya bụ nnukwu ihe na-adọrọ mmasị nke na-enyere aka n'ịgbasa ozi ya. Roland TR-808 Rhythm Composer nwere ihe ruru otu puku dollar, nke dịkwa n'okpuru puku dollar ise na n'oge ahụ Linn LM-1 gụnyere.
Ihe ngosi bu "808" bu nke Apple diri maka ikwuputa okwu ya bu onye akwu ama ama 1 DJ Zane Lowe. Mmepụta na-enye a lee anya na mmetụta na Roland TR-808 o nwere mgbe emechara ya na mpaghara egwu, site na mmalite ya ruo ugbu a.
Akwụkwọ akụkọ a gụnyere ajụjụ ọnụ na ndị omenkà dị iche iche bụ ndị bụbu akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke egwu dị ka Afrika Bombaataa, Pharrell Williams, Rick Rubin, Phil Collins, Beastie Boys, Questlove, Lil Jon, Diplo, Goldie, David Guetta, Richie Hawtin, Felix Da Ulo ulo na otutu ndi ozo.
Ọ bụrụ n’abụbeghị onye debanyere aha Apple Music, cheta na ịnwere ike ịnụ ụtọ ọrụ a site na .9,99 14,99 kwa ọnwa maka atụmatụ onwe onye ma ọ bụ .808 XNUMX kwa ọnwa maka atụmatụ ezinụlọ, yabụ ị ga - ahụ “XNUMX” naanị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ọ bụ ezie na ekwuputabeghị ọkwa, kwa o yikarịrị ka a ga-etinye akwụkwọ akụkọ «808» maka ire na / ma ọ bụ gbazite site na iTunes ozugbo a tọhapụrụ ya na Apple Music na-esote Disemba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple jidere naanị akwụkwọ akụkọ «808»